सम्बन्धमा विश्वासको खडेरी |
सम्बन्धमा विश्वासको खडेरी
प्रकाशित मिति :2018-10-31 15:43:42
ललितपुर । काठमाडौंको न्युरोडकी १३ वर्षीया निसा रेग्मी ज्ञानोदय उच्च माध्यामिक विद्यालयमा ८ कक्षामा पढ्छिन् । उनी घरमा बस्दा साँझ बिहान टीभी हेर्ने, रेडियो सुन्ने गर्छिन् । कहिलेकाहिँ पत्रपत्रिकाहरू पढ्छिन् ।
भन्छिन्, ‘मलाई पढाई संगसंगै कहाँ के भइरहेको छ भन्ने बारेमा जान्न मन लाग्छ । त्यसैले पनि रेडियो सुन्ने, पत्रिका पढ्ने, टिभी हेर्ने गर्छु ।’
पछिल्लो समय आफ्नै उमेरका बालिकाहरू दिनहुँ बलात्कृत भइरहेका समाचारले उनी तर्सिन्छिन् । ६ महिने बालिकादेखि ९० वर्षमाथिका वृद्धा समेत बलात्कारको सिकार भएको सुन्दा उनलाई आफू पनि असुरक्षित रहेको महसुस हुन्छ ।
‘घरमा बुवा, दाईभाई र विद्यालयमा शिक्षकबाटै किशोरी बलात्कृत भएको सुनिन्छ । यस्ता समाचार सुन्दा त अब कसैको विश्वास लाग्दैन । विद्यालय गए पनि शिक्षक र साथीहरूले केही गर्छन् कि भन्ने पीर लाग्छ’ उनले सुनाइन् ।
आफन्त चिनजानकै मान्छेबाट महिला, किशोरी असुरक्षित हुन्छन् भने हाम्रो विश्वासको पात्र को त ? उनले प्रश्न गरिन् ।
म जस्तै अरु किशोरीहरू पनि यही पीडामा छन् आजभोली । विद्यालय जाँदा आउँदा पनि साथीहरूसँग यही विषयमा कुरा हुने गरेको निसाले बताइन् ।
भन्छिन्,‘सबैभन्दा त कञ्चनपुरकी मेरै उमेरकी साथी निर्मला र पोखराकी १० वर्षीया श्रीयाका घट्नाले अहिले पनि मन डराइरहेको छ’ उनले थपिन् ।
नेपालगञ्जकी समिक्षा श्रेष्ठ पढाइको सिलसिलामा काठमाडौमा छन् । उनी स्वयम्भूमा रहेको बनहट कलेजमा स्नातक पढिरहेकी छन् । उनलाई पनि किशोरीमाथि भइरहेका बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटनाले मन शान्त हुन दिन्न ।
‘घटनाहरू सुन्दा सुन्दा कहिलेकाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे पनि झम्टन्छकी भन्ने पिर लाग्छ’ उनले सुनाइन् । भन्छिन्, ‘बुवाबाटै छोरी बलात्कृत भएको सुन्दा त बुवाको मुखमा हेर्न समेत लाज लाग्छ । पढाइ भन्दा पनि आजभोली कसरी आफू सुरक्षित हुने र को कोबाट बच्ने भन्ने कुराको चिन्ता बढी हुन्छ ।’
समिक्षा दिनहुँ रेडियो सुन्छिन् । टीभी हेर्छिन् । बलात्कारका समाचार नभएको कुनै बुलेटिन हुन्न । ‘अनि कसको विश्वास गर्नु ? केटामान्छे जति सबै बलात्कार नै गर्छन् कि भन्ने सोच आउँदोरहेछ’ उनले सुनाइन् ।
स्वयम्भूकी तेञ्जिङ गुरुङलाई पनि आज भोली यस्तै कुराले सताउँछ । बिहान ५ बजे नै कलेज जानुपर्दा एक्लै बाटोमा हिँड्दा पनि डरलाग्ने गरेको उनले बताइन् । ‘आफ्नै केटा साथीसँग नि डर लाग्छ अहिले त । शंका लाग्छ । कहिले के पो गर्छन् भन्ने हुन्छ’ उनले भनिन् ।
कुसुम, निसा र तेञ्जिङ जस्तै अहिले प्राय बालिका अथवा किशोरीहरूको मनमा यस्तै डर छ । दिनहुँ बढ्दै गएका यस्ता घट्नाले उनीहरूको मस्तिष्कमै ठूलो असर पारेको छ ।
जसले गर्दा उनीहरूले विश्वासिला साथी र आफन्तसंग पनि डराउनुपर्ने परिस्थिती आएको छ । बालिका आश्मा बस्नेत काठमाडौँकै एउटा बाल क्लबमा आबद्ध छिन् । उनी बालबालिकाका सवालमा आवाज पनि उठाउछिन् ।
भन्छिन्, ‘बालिकालाई त पेटमै पनि डराइ बस्नुपर्ने अवस्था छ । छोरी भए पाल्ने र छोरा भए राख्ने परिपाटीले छोरीलाई जन्मिनै नदिने, जन्मिए स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्नै नदिएको महसुस हुन्छ ।’
त्रास बढ्दैः मनोविद् तथा अधिवक्ता नानी थापा
मनोविद् तथा अधिवक्ता नानी थापाले अहिले भइरहेका बलात्कार तथा हत्या हिंसाले बालिका अथवा किशोरीहरूमा सबैभन्दा ठूलो त्रास फैलिएकोे बताइन् ।
अधिवक्ता नानी थापा
यतिमात्रै नभई आफन्त, नातागोता र साथीसंगीबाटै महिला यौन हिंसामा परेका घटनाले सम्बन्धमा विश्वासको खडेरी परिरहेको उनको भनाइ छ ।
भन्छिन्, ‘पहिले साथिसंगी भनेर नजिकिएकासँग पनि महिलाको दुरी बढेको छ । घरपरिवार भित्रै पनि दाईभाई, बुवा, हजुर बुवाप्रति पनि उनीहरू डराइरहेका छन् । जसले गर्दा बालिका अथवा किशोरीको मस्तिष्कमा नराम्रो असर परेको छ ।’
बालिका बलात्कारका घटनाले पहिलेदेखि जमिरहेका सम्बन्धमा धेरै ठूलो दुरी र त्रास सिर्जना भएको उनले बताइन् । यतिमात्र हैन यसले बालिकाका अभिभावकमा पनि उत्तिकै डर पैदा भएको छ ।
छोरीलाई बाहिर एक्लै जान नदिने, घरमा आउन ढिलो भए रिसाउने, छोटो लुगा लगाउन नदिने जस्ता कार्य यस्ता घटनाले बढाइदिएको नानीको बुझाइ छ ।
‘छोरा जस्तै छोरीलाई पनि स्वतन्त्र छोड्ने अभिभावकलाई पनि यस्ता घटनाले तर्साएको छ’ उनले भनिन्, ‘यसको महिलाहरूको गतिशिलतामा प्रहार गर्छ । महिलालाई स्वतन्त्रतापूर्व हिँडडुलको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो ।’
अहिले धेरैजसो बालिका तथा किशोरी यस्ता घटना सुनेर नै मानसिक समस्यामा परेको भन्दै मनोविद् थापाले यो बेलामा घरपरिवार र अभिभावकको ठूलो जिम्मेवारी हुने बताइन् ।
परिवारले जबसम्म छोरीलाई बालिकामैत्री व्यवहार गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको डर नहट्ने उनको भनाइ छ ।